GMM oo gudbinaya liiska guddiga doorashada ee tabashadu ka jirto | KEYDMEDIA ONLINE
GMM oo gudbinaya liiska guddiga doorashada ee tabashadu ka jirto
Golaha Midowga Musharixiinta ayaa maanta la filayaa in ay gudbiyaan liiska guddiga doorashada dadban ee ay cabashada ka qabaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kadib markii Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, uu shalay magacaabay guddi heer wasiir ah oo baaritaan ku sameynaya eedeymaha loo jeediyay guddiyada doorashooyinka dalka, ayaa la filayaa in maanta Midowga Musharaxiintu gudbiyaan xubnaha ay tabashada ka qabaan.
Sida ay xaqiijinyaan ilo xog ogaal ah, ku dhawaad labaatan ruux oo ka tirsan labada heer ee guddiga ayay gudbin doonaan Mucaaradku, Guddiga Musharaxiinta u qaabilsanaa turxaan bixinta guddigan, ayaana kulan ay shalay Muqdisho ku yeeshay isku af-gartay, xubnaha loo gudbinayo Xukuumadda.
Kahor inta aan Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsinta loo gudbin liiska guddiga tabashadu ka jirto, waxaa la sii marsiin doonaa Guddiga heerka Wasiir ee RW Rooble, u saaray xaqiijinta caddeymaha xubnahan, kuwaas oo iyaguna u sii gudbin doona Rooble hubin kadib.
Sida ku cad tubta xallinta khilaafka Guddiyada maamulka doorashooyinka, ee heshiiskii dhawaan laga gaaray khilaafkii jiray, “Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya markii ay soo gaarto xogta xubnaha cabashada laga qabo, uuna xaqiijiyo cadeymaha xogtaas wuxuu u gudbinayaa ciddii soo magacawday si loo keeno badalkeeda, loona faafiyo muddo 2 maalmood gudahood ah, sida ku cad Tubta xallinta khilaafka Guddiyada maamulka doorashooyinka”.